မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်တို့ မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်းစင်္ကာပူ အဖွဲ့မှ လက်ခံရရှိသော ရေအလှူငွေနှင့် အလှူရှင်တို့ကို တင်ပြပါရစေခင်ဗျာ။
၁. ကိုဇော်ဝင်းထွဋ်+မနှင်းယုယုဝင်း၊သမီးလေး-အေးချမ်းပွင့်ဖြူ မိသားစု
၂. မဖြူဖြူခိုင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၃. ကိုဇော်ဝင်းမြင့်+မတင်ဇာပိုင် မှ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၄.ကိုကျော်ဇေယျဦး စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၅.ကိုမျိုးသန့် + မဥမ္မာဋ္ဌေးမှ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၆.ကိုရဲမင်းဋ္ဌေး မှ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇.ကိုကျော်လင်း စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀၀
၈.ကိုမြတ်သူရ+မယဉ်သူဇာ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၉.ကိုကြည်သာဦး+မနန်းကေသီအောင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၁၀.ကိုစောသက်မောင်+မမွှေး စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၁၁.မမြတ်မွန်သူ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၁၂.မဆွေဆွေအောင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၁၃.မဝေေ၀စိုး စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၁၄.မဇင်မာဝင်းဆွေ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၁၅.မထက်ထက်ကျော် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၁၆.မရည်မွန်မြင့် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၁၇.မချမ်းမြအေး စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၁၈.မခင်နု စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၁၉.မသူဇာ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၅
၂၀.ကိုကျော်မျိုးသက်+မမေမြဉ္စူ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၂၁.မမျိုးမြင့်စန် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၂၂.မဇာခြည်ခိုင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၂၃.ကိုတင်ထက်အောင်+မခင်မေချော စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၂၄.ကိုအောင်ဝင်းထွဋ်+မတင်တင်ခိုင် (သား) ကျော်ဇင်ထွဋ် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၂၅.ကိုမင်းမင်းလတ်+မစုအေပရယ်ကျော် မိသားစု စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၂၆. ဦးအေးကျော်+ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး (သမီး) ဖြိုးရတနာကျော် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၂၇.ဦးဝင်းကျော် မိသားစု စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၂၈.ကပ္ပတိန် ဦးအေးကိုကိုစိုးနှင့် M.T Theresa Tiga မှ သင်္ဘောသားအားလုံး ကောင်းမှု အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၉၂၅
၂၉.ကိုဝင်းဇော် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၃၀.ကိုမင်းအေးချမ်း စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၃၁.ကိုအောင်ကျော်အုန်း စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၃၂.ဦးမောင်မောင်တင့်+ဒေါ်ခင်သီလှိုင် မိသားစု စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၃၃.ဦးရီတင် စကာင်္ပူဒေါ်လာ ၅၀
၃၄.ဦးဝင်းအောင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၃၅.ကိုတင်မောင်သိန်း စင်္ကပူဒေါ်လာ ၃၀
၃၆.ကိုသိန်းစိုးဝင်း စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၃၇.ကိုစန်းနိုင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၃၈.ကိုစိုးကြီး စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၂
၃၉.ကိုအောင်ထူးဝင်း စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၈
၄၀.ကိုမြတ်ကျော်သူ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၄၁.ကိုသန်းထွဋ်အောင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၅
၄၂.ကိုထွန်းသိန်း စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၅
၄၃.ကိုကျော်စိန်ဦး စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၄၄.ကိုအေးကို စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၅
၄၅.ကိုယဉ်ထွေး စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၄၆.ကိုကျော်ကျော်ညွှန့် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၄၇.ကိုဇော်လင်းအောင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၄၈.ကိုဇာနည်လေးသွင်+မမြတ်စုလှိုင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၄၅
၄၉.ကိုဖုန်းမြင့်ကျော်+မအင်ကြင်းသန့် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၅၀.ကိုလွှမ်းမိုးအေး+မအေးမြနန္ဒာ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၅၁.ကိုဇော်ထွန်းလင်း+မအိနုသွေး စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၅၂. Wan Khin Jimmy Wang + မအေးမာအောင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၅၃.Lim Kim Song + မခိုင်ခိုင်စိုး စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၅၄.ဦးခင်မောင်အေး စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၅၅.မစန္ဒာအောင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၅၆.မစုမြတ်နှင်း စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၅၇.မသန်းသန်းလှိုင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၅
၅၈.ကိုကျော်မင်းထွန်း+မနှင်းဝေေ၀လွင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၅၉.အန်တီတင့် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၆၀.ကိုအောင်ဇော်မင်း စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၆၁.ကိုထွန်းဦး စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၆၂.ကိုနေလင်းဦး စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၆၃.မသီတာသန်းလွင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၆၄.မခင်ခင်လေး စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၆၅.မအေးအေး စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၆၆.ကိုယာမိုးလွင်+မခင်လဲ့ရီ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၆၇.ကိုအောင်ချမ်းမွန်+မနေခြည်လင်းရောင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀၀
၆၈.ကိုစလိုင်းထွန်းလင်းဦး+မတင်ထက်ထက်ဗို စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၆၉.ကိုအောင်ညီလတ်+မနန်းထိခလိန်း စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၇၀.မအေးမြတ်သူ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၆၀
၇၁.ကိုသန်းဇော်လွင်+မညိုမီမီလှိုင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၇၂.ကိုမင်းသူရိန် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၇၃.မလှိုင်ဝင်းလဲ့ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အလှူရှင်များကို နောက် Post တွင်ဆက်လက်တင်ပြသွားပါမည်။
Posted by 8Yar at 7:58 am 10 comments
Posted by 8Yar at 10:21 pm9comments
အစကတော့ Chingay (အပိုင်း ၂) ကိုမတင်တော့ဘူးလို့ စဉ်းစားထားတာ။ အကြောင်းက 8Yar ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကမှောင်တော့ လျှောက်ကလိရင်းကနေ ပုံတွေက ပိုပိုဆိုးလာသလားလို့။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံဆိုဒ်နဲ့ အရေအသွေးကိုတင်လို့မရတာကြောင့် အတော်ပဲစိတ်ညစ်မိပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် စာဖတ်သူ တစ်ယောက်စ၊ နှစ်ယောက်စလောက်က Chingay (အပိုင်း ၂) ဘယ်တော့တင်မှာလည်းချည့်မေးမေးနေတော့ ကိုစိတ်တင်းပြီးတင်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Chingay (အပိုင်း၁) ကိုတော့ ဒီမှာတင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပုံကိုအကြီးကြည့်ချင်ရင် ပုံပေါ်ကလစ်နှိပ်ပြီးသာ ကြည့်ပေးကြပါခင်ဗျာ။
NUS အဖွဲ့သားတွေပါ။ သူတို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။
ဒိုင်းညောင့်၊ ဒိုင်းညောင့်.... :P
မည်းမည်းမှောင်မှောင်၊ ပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင် ရှိကြပါပေတယ်။
ဟူး ဟူး ဟား..... ဟူး ဟူး ဟား..... ကျွန်တော်လူရိုင်းပါခင်ညာ။ အာဖရိက ကလူဖြူလူရိုင်း အဟိ...
မစဉ်းစားနဲ့ ပြန်ပေတော့ အက...
နာတွ Ladies first တွေရဲ့ အရှေ့က လျှောက်ခွင့်ရတာ။ ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်မိုလို့... :P
ချစ်စရာ့ အရွယ် ကလေးငယ်များ
တို့ရဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဂြိုလ်သားတွေ၊..... ကျားပေါက်ရဲ့ ဂျိုသားတော့မဟဟုတ်ဘူး စတားဝါးထဲကဂြိုလ်သား :P
အဟိ... 8Yar ကိုရယ်ပြသွားတယ်။ သွားကြီးကိုဖြဲလို့ တိန်! :P
ခန့်တော့ခန့်တယ်၊ ဒါပေမယ့် လူမလေးစားဘူး။ တိန်! :P တားပြောတာ ဓာတ်ပုံထဲကလူကိုပြောတာနော်။ လျှောက်တွေးနဲ့.....
ဪ.... သနားပါတယ်။ အောက်စီဂျင်ပိုက်နဲ့ လမ်းလျှောက်နေရရှာတယ်။.....
ကြည့်စမ်း သူများတွေ စက်ဘီးစီးတာ ဘယ်လောက်ရိုသေလဲ နှစ်ဘီးလုံးချစီးရင် စက်ဘီးနာမှာစိုးလို့ တစ်ဘီးချင်းပဲချစီးတယ်။ ဟွန့်..
တိုက်ကွမ်ဒိုကလေးတွေတော်ချက် ပျဉ်ပြားကို ဂျွန်းပစ်ပြီးခွဲပြသွားတာ။ 8Yar လဲ အရှေ့မှာလာပိတ်နေတဲ့လူရဲ့ခေါင်းကို ပစ်ခွဲချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်။ ဟွင်း ဟွင်း...
လက်ထဲမှာကိုင်ထားတယ်တွေ့လား ပျဉ်ပြားကို။ မနိုင်ရင် ပျဉ်ပြားနဲ့ပလာတာလုပ်မယ် တိန်!
ထမင်းနဲထိုးရအောင်လဲ ဒယ်အိုးမရှိ၊ လှေလှော်ရအောင်လဲ လှေမတွေ့ ဘာလုပ်ကြမှာပါလိမ့်???
အောက်မှာကနေတာ ရေခူ အပေါ်မှာရပ်နေတာ ပြည်ကြီးငါး နှစ်ခုလုံးပင်လယ်စာ ပြောရင်းနဲ့တောင်ဗိုက်စာလာပြီ အဟီး.... :P
အားလုံးပဲ ကိုယ်ရော၊ စိတ်ပါ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။
Posted by 8Yar at 10:08 pm 10 comments
ပေးထားတဲ့ သရုပ်ပျက် ယဉ်ကျေးမှုကို
ခင်ဗျားတို့ တွေးထားတဲ့ ဇာတ်ရုပ်ထက်
ပရိတ်သတ်ရင်ထဲက ဇာတ်ထုတ်က ပိုတောက်ပပါတယ်...
ရေးချင်တာအတွက် တောင်ပံတစ်စုံ ပေးမယ်ဆိုရင်
Posted by 8Yar at 2:18 pm 17 comments
ယခု အိပ်ယာ လူနုံဖြစ်နေ၏။ အကြောင်းမှာ စိတ်တိုနေခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်၏။ ဘယ်သူ့ကို ဒေါသထွက်သလဲ ဟုမေးလျှင် မမေးပါနှင့်ဟု တောင်းပန်ပါမည်။ ဒီနေ့ Orchard Road သွားပါသည်။ Orchard Road ပေါ်မှာ model show လည်းရှိပါသည်။ သို့သော် အိပ်ယာ ကင်မရာပါမသွားပါ။ HANG TEN member ဝင်များ၏ မွေးနေ့လတွင် မူရင်းဈေး၏ 50% off ရှိသည်ဆို၍ အိပ်ယာညီမ အားကိုးဖြင့် အင်္ကျီသွားဝယ်ပါသည်။ သို့သော် အချို့အင်္ကျီများမှာ မူရင်းဈေး၏ 60% လျှော့၍ရောင်းချနေသဖြင့် HANG TEN member ဝင်များထက် 10% သက်သာနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် member ကဒ်လုပ်ခြင်းသည် အဘယ်သို့သော အဓိပ္ပါယ်ရှိအံ့။ ဒီနေ့မျက်နှာပေါင်းတင်၏။ အသားညက် မညက်တော့မသိ၊ အိပ်ယာနှာစည်းသွား၏။ တခါမှ မတင်ဖူး၍လော၊ အဝတ်စို အကြာကြီး မျက်နှာပေါ်တင်ထား၍လောမသိပေ။ ခြောက်ကပ်ကပ်နိုင်လှသော အိပ်ယာအိမ်လေးကိုကြည့်၍ မျက်ရည်အစား နှာရည်တတောက်တောက်ကျနေမိသည်။ ဘလော့မောင်နှမများ မခင်၍လော၊ အလုပ်များနေကြ၍လော မသိတော့ပြီ။ :(
စိတ်ရော၊ လူရော နေမကောင်း၍ ရေးချင်ရာ ရေးမိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မည်သူကိုမှထိခိုက်စေလိုခြင်း မရှိပါခင်ဗျာ။
Posted by 8Yar at 11:35 pm 19 comments
မင်္ဂလာပါနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာ။ 8Yar တစ်ယောက် ပိတ်ရက်တွေမှာ ရှိသမျှတရားပွဲပြေး ကျွေးတာစား၊ ပေးတာယူ အဲလေ... လုပ်အားဒါနသွားကူ၊ ဓာတ်ပုံပြေးရိုက်နဲ့ တစ်ယောက်ထဲ ရွာပတ်နေတဲ့ အချိန်... ကျွန်တော်ခင်ရတဲ့ အစ်ကိုမိုးဇက်က ညီလေး မင့်ကြည့်ရတာ ကုသိုလ်လုပ်ဖို့လိုနေသလိုပဲ ဆိုပြီး သွား၊ သွား ရွာထဲပတ်ပြီး အလှူခံချေစမ်း ဆိုတာကြောင့် တစ်ယောက် ခွက်ဆွဲပြီး... အီး... အီး... အဲ.. အဲ.. မှားပြီ ဖလားဆွဲပြီး ဘလော့ရွာထဲ ဆင်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အဲ့ဒါနဲ့ ဘယ်ကိုအရင်စသွားပြီး အလှုခံရင်ကောင်းမလဲ လို့စဉ်းစားရင်းလျှောက်လာလိုက်တာ ရွာထိပ်တောင်ရောက်လာပါရော့လားဗျာ။ အခုချိန်ထိ ဘယ်အိမ်ကို စအလှုခံရမယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားလို့ကိုမရသေးဘူး။ အစဆိုတာ သိပ်အရေးကြီးတယ်မဟုတ်လား။ ဟဲ ဟဲ... ကဲ ထူးပါဘူး။ စဉ်းစားနေယုံနဲ့ပြီးမှာ ဟုတ်ဘူး။ ကြုံတဲ့အိမ်မှာ ဝင်ခံမယ် အဲလေ... အလှုဝင်ခံမယ်ဆိုပြီး ရွာထိပ်က သမံစီးအိမ်ဝင်လာခဲ့တယ်။
တိန်! ဝင်ဝင်ချင်း ပင်ကွင်းနဲ့တွေ့ ဆိုသလို သမီးစံရဲ့ အိမ်အဝင်ဝမှာ အလှုခံဖလားကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုရင်ပဲ 8Yar တစ်ယောက် ဘက်ဂီယာကို ဒရကြမ်းသွင်း နောက်ကြောင်းကိုပဲယွန်းခဲ့ရလေသည်။ အခြေနေမှ မကောင်းပဲကိုး။ :P
အဲဒါနဲ့ Candy အိမ်ဖက်ရောက်လာတာနဲ့ ဝင်လိုက်တယ်။ အရမ်းထူးစမ်းနေတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။ Candy ရဲ့ ကလားအိုကေ ဟစ်သံလည်းမကြားရလို့ ခစ်ခစ်။ ဒီတစ်ခါတော့ အပိုင်ပဲဆိုပြီး ခုန်ဝင်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ။ ဘုန်း! အင့်... ကြီးမားသော ဂတ်ထူဘုံးကြီးကိုဝင်တိုက်မိလေရဲ့။ နာလိုက်တာဗျာ။ :( လန့်လည်းအတော်လန့်သွားတယ်။ ဘာလို့များဒါကြီး လမ်းလယ်ခေါင်မှာချထားပါလိမ့်?? အမယ် ဂတ်ဘုံးမှာစာကပ်ထားသေးတယ်။ ဘာတဲ့... "အနာကြီးရောဂါသည်ဂေဟာအတွက် စုပေါင်းအလှူ" တိန်! ဒါ... ဒါ... အလှုခံဘုံးကြီးပဲ။ သိသိချင်း လှည့်ပြေးဖို့ပြင်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူများတွေ့သွားသေးလဲလို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို တစ်ချက်ရှိုးလိုက်တယ်။ :P အဟိ ဒူမှရှိဘူး.. ဆိုတာနဲ့ 8Yar တစ်ယောက် ခြေတင်သုတ်ပါလေတော့တယ်။
ဒီနေ့ ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့် အစကတည်းက တစ်ခုမှအဆင်မပြေဘူး။ နောက်အိမ်တွေကို ရမ်းဝင်လို့ မဖြစ်ဘူး လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ အရင်ဆုံး အကဲခတ်မှဖြစ်တော့မယ်။ လာလေရော့ နောက်တစ်အိမ် ဒါဒုအိမ်ပါလိမ့်?? ဪဟော်.... သိပြီ တစ်လုံးထဲနဲ့ မောင်လုပ်နေတဲ့ စွယ်စုံကြမ်း အဲလေ... စွယ်စုံကျမ်း ရဲ့အိမ်ပဲ။ အိမ်ရှေ့ကနေ လှမ်းရှိုးလိုက်မယ် မှန်းစမ်း.... လား လား Candy အိမ်ကလို ဂတ်ပုန်းမျိုးပဲ စာလည်းရေးထားတယ်။ ၁။ငွေသားအလှူ ၂။ဆေး၊ ဆန်အလှူ ၃။အ၀တ်အထည် ၄။၀ှီးချဲ များကို မောင်(စွယ်စုံကျမ်း)သို့ လှုနိုင်ပြီ။ သူဘာလို့ ဒါတွေလိုနေပါလိမ့်?? တိန်! ဟီး.... နောက်မှ စဉ်းစားတော့မယ်။ :P
8Yar တစ်ယောက် ဘလော့ရွာလမ်းမကြီးအတိုင်း ဖလားကြီးပိုက်ကာ ဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။ ဟိဟိ.. အစ်ကိုရင်နဲ့ အစ်မဒိုးတို့အိမ်နားရောက်လာပြီ။ သူတို့က နှစ်ယောက်ဆို တော့ အလှူငွေရရင် နှစ်ယောက်စာရမှာပဲ လို့တွေးလိုက်တယ်။ အိမ်ဖက်ကိုကွေ့ဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကိန်! 8Yar အော်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အစ်ကိုရင်အိမ်ဘေးမှာ လာပြီးကျောခင်းနေသော လေးဖက်သွား သတ္တဝါလေး၏ ရှည်လျားထွေပြားနေသော အမြှီးအား တတ်နင်းမိသောကြောင့် ထွက်လာသောအသံဖြစ်ပါ၏။ အဲ့ဒီအော်နေတဲ့ သတ္တဝါလေးကို အရေးမလုပ်နိုင်ပဲ အိမ်ထဲကို အလျှင်အမြန်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ဟိုက်!! ငွေဖလားကြီးပါလား။ နည်းတဲ့ဟာကြီး မဟုတ်ဘူး။ ငွေအစစ်သာဆိုရင်တော်တော် တန်ဖိုးရှိမှာပဲ။ :P တိန်! လာရင်းကိစ္စမေ့တော့မလို့ ဟီး... နေအုံး ဒီဖလားကြီးက အလှုခံဖလားကြီးလား? အမဒိုးကို ထမင်းကျွေးတဲ့ဖလားကြီးလား? လူတောင် ရူးချင်ချင်ဖြစ်လာပြီ။ တော်ပြီ မစဉ်းစားတော့ဘူး၊ ပြန်တာပဲကောင်းတယ်။ ဆိုပြီး သခိုးခြေလှမ်းနဲ့လှည့်အထွက် ဒါက ဘယ်ကို သွားမလို့တုန်း!!! ဆိုတဲ့ အစ်ကိုရင်ရဲ့ကြီးမားကျယ်လောင်လှတဲ့ အသံကြီးကို အနောက်ကနေကြားလိုက်ရတယ်။ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ လည်းတုန်တက်ပြီး အတော်လန့်သွားတယ်။ စိတ်ထဲမှာလဲ သွားပြီ ဒီတစ်ခါတော့ သူဦးသွားပြီ ဆိုပြီး အတော်လန့်နေမိတယ်။ :( သူကိုဘာပြန်ပြောရမလဲဆိုတာ ဦးနှောက်ကိုအမြန်အလုပ်ပေးပြီး ပါးစပ်က စကားလုံးအချို့ ထွက်ကျမလာခင်။ အိမ်သာသွားမလို့.... ဆိုတဲ့ အစ်မဒိုးရဲ့ အသံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ တစ်ဆက်ထဲကြားလိုက်ရတာက အေး သွားရင်လဲ ဟိုတစ်ခေါက်ကလို အနံ့တွေမကျန်ခဲ့စေနဲ့ တိန်! ဘာတွေလဲတော့မသိ။ အို... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူး။ ဒညှင်းသီးနဲ့ပဲ ဆိုင်လိမ့်မယ် :P အဟိ။ တော်သေးတာ ပေါ့ 8Yar ကိုတွေ့မသွားလို့။ :P ခစ်ခစ်။ အစ်ကိုရင်တို့ အိမ်ဘေးကထွက်လာတော့ အခုနက တက်နင်းခံရတဲ့ ကိုကိုခွေးက ကိုယ့်ကို မကြည့်သလိုစိုက်ကြည့်ပြီး ကျန်ခဲ့လေရဲ့။
ဒီနေ့တစ်မနက်လုံး ရွာရိုးကိုးပေါက်လျှောက်ပြီး အလှုခံထွက်လိုက်တာ ဖတ်ဖတ်သာမောသွားတယ်။ ဘာအလှုငွေမှ မရလိုက်ဘူး။ သူများတွေကို အလှုခံမရသေးရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်အရင် အလှုငွေထည့်မယ် လို့စဉ်းစားလိုက်ပြီး ဒိုမိန်းဝယ်ဖို့ဆုထားတဲ့ ပိုက်ဆံ 50S$ ကိုထည့်လိုက်တယ်။ :) အဲ့ဒီအတွက် လက်လဲမတုန်ဘူး၊ ရင်လဲမခုန်ဘူး ဟိဟိ... 50S$ လေးနဲ့ ရင်တုန်ပြရင် တာဝန်ရှိ ဘလော့မောင်နှမတွေ ဝိုင်းဆုံးမကြလိမ့်မယ်။ 8Yar ရဲ့ ကုသိုလ်ကို ထပ်ပြီးချီးမြောက်တဲ့အနေနဲ့ အလှုငွေများ လှူတန်းချင်တယ်ဆိုရင် အောက်က Blogger ဘုန်းဘုန်း၊ ကိုကို၊ မမ တွေကို ဆက်သွယ်လှူတန်းနိုင်ပါကြောင်း နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲလိုမှမဟုတ် 8Yar ကိုမှလှူချင်တယ် အဲ့လေ... 8Yar ဆီကနေတဆင့်လှူပေးပါဆိုတဲ့ လူတွေအတွက် တာဝန်ခံ ဘလော့ဂါတွေရဲ့ အောက်နားလေးမှာ 8Yar ရဲ့ ဖုံးနံပါတ်နဲ့ E-mail လိပ်စာလေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မူရင်းဆိုက်ကို ဒီမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
+၆၀ ၁၄၇၂ ၄၅၄၀၂
9191 9264 (Singapore)
အပေါ်မှာထီပေါက်သွားတဲ့ ဘလော့မောင်နှမများခင်ဗျာ။ 8Yar တစ်ယောက် ဒီကုသိုလ်လေးမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အပျော်လွန်ပြီး ရေးမိရေးရာ ရေးလိုက်တဲ့အတွက် မကြိုက်တာများပါသွားရင် လက်ဆယ်ဖြာထိပ်မှာမိုးလို့ တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အစ်ကိုမိုးဇက်ပို့ပေးသော အစ်ကိုရင်ရဲ့ လေးကို အောက်မှာ ဆက်လက်ဖတ်ရှူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မြန်မာမုဒိတာလူငယ်များအဖွဲ့၏ ဒုတိယမြောက်အလှုအဖြစ် မရမ်းချောင်း အနာကြီးရောဂါသည်ဂေဟာကို ဧပြီလပထမပတ်တွင် လိုအပ်သည်များကို တတ်နိုင်သလောက် လှုဒါန်းရန် စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျား။အလှုငွေ ရရှိမှု အပေါ်မူတည်ပြီး
၄။၀ှီးချဲ များကို အလှုငွေ ရရှိတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး လှုဒါန်းနိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ပါဝင်အားဖြည့် လှုဒါန်းလိုသူများအား ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျား။
လိုအပ်သူများကို လှူတန်းခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ယူကြပါစို့။
Posted by 8Yar at 1:28 pm 11 comments
Posted by 8Yar at 4:33 pm 14 comments
Posted by 8Yar at 3:30 pm 25 comments